Barashada axkaanta Islaamka | Tixraaca Fudud Ee Muslimka
Barashada axkaanta Islaamka
Waxaa la doonayaa qofka Muslimka inuu ku dadaalo barashada axkaanta sharciga dhammaan dhinacyada noloshiisa, cibaadooyinkiisa iyo hab dhaqannadiisa iyo xiriirradiisa si uu ugu guto cibaadada si ka fiirsi leh iyo cilmi sida uu Rasuulkii Ilaahay  yiri: “Qofkii uu Allaah la doono khayr wuxuu fahansiiyaa diinta” (Al-Bukhaari 71, Muslim 1037)
Marka waxaa ku waajib ah qofka Muslimka barashada axkaanta waajibka ah sida habka loo tukado, sida la isu daahiriyo, waxa bannaan ama xaaraanta ah xagga cunnada iyo cabbitaannada, iwm waxaa sidoo kale ajar laga helaa inuu barto axkaanta waxyaalaha sharciga nagu dhiirrageliyey laakiin kuma aha waajib qofka.
Dhammaan falalka qofka iyo hadalladiisa iyo hab dhaqankiisa kama baxsana shan xaaladood:
Waana waxa uu Allaah amray isagoo laga ajarsiiyo qofkii la yimaada oo loo ciqaabo qofkii ka taga sida shanta salaadood ee faralka ah, iyo soomidda bisha Ramadaan
Waa waxa uu Allaah reebay isagoo laga ajarsiiyo qofkii ka taga, oo loo ciqaabo qofkii fala sida zinada iyo cabbidda khamriga.
Sunno iyo Waxa fiican in lala yimaado ee ajar leh
Waana waxa uu Islaamku dhiirrageliyey in la falo isagoo laga ajar siiyo qofkii fala ha yeeshee aan loo ciqaabin qofkii ka taga oo iska daaya, sida u muusoodka dadka iyo u dhoolle cddeyntood, iyo in lagu billaabo slaanta, iyo ka qaadista qashinka jidka.
Waxyaalaha xun ee makruuha ah
Waana waxa uu Islaamka dhiirra geliyey in laga tago isagoo laga ajar siiyo qofkii ka taga, ha yeeshee aan loo ciqaabin qofkii fala sida ku ciyaaridda faraha inta lagu jiro salaadda.
Waana waxa in la falo iyo in la iska daayo aan ku soo aroorin wax amar ah iyo iska reebid midna sida cunidda iyo cabbidda iyo hadalka.
Shanta Tiir Ee Islaamka
Nabigu  wuxuu yiri: “Islaamka waxaa lagu dhisay shan (tiir): Ka markhaati kaca inuusan jirin la caabude xaq ah aan ahayn Allaah, iyo in Muxammad yahay Rasuul Ilaahay, iyo oogidda salaadda, iyo bixinta Sakada, iyo u xajinta Beytka (Kacbada), iyo soomidda (bisha) Ramadaan” (Al-Bukhaari 8, Muslim 16).
Shantan tiir ee Islaamka waa dhidibbada aasaaska u ah diinta iyo tiirarkiisa waaweyn, waxaana ku caddeyn doonnaa oo ku faahfaahin axkaantooda cutubyada so socda.
Waxaa ugu horreeya Iimaanka iyo towxiidka waana cutubka soo socda aan u bixinnay (Iimaanka Muslimka).
Waxaa xiga salaadda ee ah tan ugu weyn cibaadooyinka oo ugu sharaf badan. Nabigu  wuxuu yiri: “Islaamka Tiir dhexaadkiisu waa salaadda” (At-Tirmidi 2749), macnaha waa tiirka uu Islaamka ku taagan yahay oo ku dhisan yahay oo aan Islaam jirin la’aantiis waa Salaadda.
Laakiinse salaadda waxaa u shardi ah ansaxeeda inuu guto qofka Muslimka ah isagoo daahir ah, sidaas awgeed waxaa xigsan doonaa cutubta (Iimaanka Muslimka), cutub ah (Dahaarada Muslimka) kaddibna (Salaadda Muslimka) sidaas baynuna ku wadaynaa.
Ka markhaati kaca inuusan jirin la caabude xaq ah aan ahayn Allaah iyo in Muxammad yahay Rasuul Ilaahay
Soomidda (bisha) Ramadaan
U Xajinta Beytka (Kacbada)